ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ – Page3– Shangyimm
ပွုလုပျသငျ့သော နံနကျအိပျရာထ အမူအကငျြ့မြား
Posted on October 12, 2020 October 12, 2020 by Shangyi
ပြုလုပ်သင့်သော နံနက်အိပ်ရာထ အမူအကျင့်များ
ခေတ် လူငယ်တော်တော်များများက ညဘက်ဂိမ်းဆော့တာ၊ တီဗီကြည့်တာ၊ ဂိမ်းကစားတာနဲ့ fbကြည့်တာတွေလိုမျိုး ပြုလုပ်နေတာကြောင့် အိပ်ရာဝင်ချိန်နောက်ကြတတ်ပြီး မနက်ပိုင်း တော်ရုံနဲ့ အိပ်ရာက မထနိုင်ကြတော့ပါဘူး။
အခုလိုကိုဗစ်ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ ကာလတွေမှာ ရုံးတက်စရာမလို၊ အလုပ်သွားစရာမလို ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းတက်စရာ မလိုတော့တဲ့ အတွက် အိပ်ရာဝင်ချိန်က ပိုပြီး နော်ကြလာကာ မနက်နေဖင်ထိုးမှ အိပ်ရာထ နေတာကြောင့် နံနက်စာ တောင် လွတ်သွားကြပါတယ်။ ဒီ အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိနေရင် အခု အချိန်မှာ ပြုပြင်လိုက်ပါ။ အိပ်ရာဝင်ချိန် နဲ့ နံနက်အိပ်ရာထချိန်ကို တစ်နေ့ နဲနဲချင်း အချိန်ရှေ့တိုး လိုက်နိုင်ရင် stay at home ဖြေလျော့ပေးတဲ့ ကာလအရောက်မှာ ပုံမှန် အိပ်ချိန် ထချိန်( ည ၁၁နာရီအိပ် မနက် ၆နာရီခွဲ-၇ နာရီထ) ကို ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါတို့က နံနက်အိပ်ရာထချိန်မှာ သင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ပြုလုပ်သင့် တဲ့ အမူအကျင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ နာရီနိုးစက်မြည်တာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် အလိုအလျောက်အိပ်ရာမှ နိုးလာရင် အိပ်ရာမှာ နှပ်မနေပဲ အိပ်ရာကထလိုက်ပါ။ အိပ်ရာက မထပဲ နှပ်နေရင် ပြန်လည် အိပ်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
အိပ်နေစဉ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ၆-၈ နာရီလောက် ရေမရရှိဘဲ နေနေရပါတယ်။သင်အိပ်နေစဉ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်း (ဥပမာ အစာခြေတာ၊ အသက်ရှူတာ၊ပျက်စီးနေတဲ့ ဆဲလ်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်တာ)တွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေရတာမို့ ရေငတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မနက်အိပ်ရာထထချင်းမှာ ရေနှစ် ဖန်ခွက်လောက် သောက်ပေးပါ။(ဒီ အကြောင်းကို ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရေးပြီး ဖော်ပြပေးပါမယ်။)
မနက်အိပ်ရာထခါစမှာ အရင်နေ့တွေက သင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကောင်းတာတွေကို တွေးပြီး ကြည်နူး လိုက်ပါ။
ညစဉ် ၆-၈ နာရီလောက် အိပ်စက်ချိန်မှာ လှုပ်ရှားမှု မရှိတဲ့ အတွက် မနက်အိပ်ရာထခါစမှာ ဆွဲဆန့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာက အဆစ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် သန်မာမှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရာထချိန်နောက်ကြလို့ နံနက်စာကို မစားကြသူတွေ တော်တော်များပါတယ်။ အစာတစ်နပ်လွတ်သွားတဲ့ အတွက် နေ့လယ်စာနဲ့ ညစာကို မချင့် ချိန် နိုင်တော့ပဲ အလွန်အမင်း စားသုံးမိ နိုင်ပါတယ်။ နံနက်စာကသင့်ကို စွမ်းအင် ပေးနိုင်တာမို့ အနည်းဆုံး ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံးတော့ ရအောင် စားပါ။
အိပ်ရာထခါစ ဘလက်ခ်ကော်ဖီသောက်တာက ကိုယ်တွင်းကော်တီစောဟော်မုန်း ပမာဏ များလာတာကြောင့် စိုးရိမ်စိတ် များလာနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဘလက်ခ်ကော်ဖီက အစာအိမ်ရောင်ရမ်း နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့က နံနက်စာစားပြီးမှ သွားတိုက်တဲ့ အကျင့်ကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အစာစားပြီးပြီးချင်း သွားတိုက်တာက သစ်သီး၊ဖျော်ရည်နဲ့ အစာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ အက်စစ်တွေကြောင့် သွားရဲ့ ကြွေလွှာ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ အစာစားပြီးပြီးချင်း ရေနဲ့သာ ပလုတ်ကျင်းပါ။ အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ စောင့်ပြီးမှ သွားတိုက်ပါ။
ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးရင် ရေနွေးကြောင့် မွေးညင်းပေါက်တွေ ပွင့်လာကာ အရေပြားထဲ ပိုးမွှားနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ဝက်ခြံ ပေါက်နိုင်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ ရေအေးနဲ့သာရေချိုးသင့်ပြီး ရေနွေးနဲ့ ချိုးမယ်ဆိုရင်လည်းေ
ရနွေးနဲ့ ချိုးအပြီး ရေအေး ပြန်လောင်းလိုက်ပါ။
ဗဟုသုတ ရရှိအောင်၊ခေတ်ကိုအမှီ လိုက်နိုင်အောင် မနက်ပိုင်းမှာ သတင်းစာ၊ဂျာနယ်ဖတ်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က သတင်းတွေဖတ်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းရင်းမြစ် ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
သင့်ကိုကူညီသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ် ကြည့်ရင်း သင့်အတွက် ပေးထားတဲ့ comment တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ။ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အလှူဒါန တွေကို သာဓုခေါ်ပါ။ သင့်မှာ မကောင်းမြင် စိတ်ရှိနေရင်တောင် ဒါတွေကဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ပြုံးတာ၊ရယ်မောတာကြောင့် ကိုယ်တွင်းမှာ စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်း အောက်ဆီတိုစင်ထွက်လာကာ အကောင်းမြင်စိတ် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ခတျေ လူငယျတျောတျောမြားမြားက ညဘကျဂိမျးဆော့တာ၊ တီဗီကွညျ့တာ၊ ဂိမျးကစားတာနဲ့ fbကွညျ့တာတှလေိုမြိုး ပွုလုပျနတောကွောငျ့ အိပျရာဝငျခြိနျနောကျကွတတျပွီး မနကျပိုငျး တျောရုံနဲ့ အိပျရာက မထနိုငျကွတော့ပါဘူး။
အခုလိုကိုဗဈကွောငျ့ အိမျတှငျးအောငျးနရေတဲ့ ကာလတှမှော ရုံးတကျစရာမလို၊ အလုပျသှားစရာမလို ဒါမှမဟုတျ ကြောငျးတကျစရာ မလိုတော့တဲ့ အတှကျ အိပျရာဝငျခြိနျက ပိုပွီး နျောကွလာကာ မနကျနဖေငျထိုးမှ အိပျရာထ နတောကွောငျ့ နံနကျစာ တောငျ လှတျသှားကွပါတယျ။ ဒီ အကငျြ့ဆိုးတှေ ရှိနရေငျ အခု အခြိနျမှာ ပွုပွငျလိုကျပါ။ အိပျရာဝငျခြိနျ နဲ့ နံနကျအိပျရာထခြိနျကို တဈနေ့ နဲနဲခငျြး အခြိနျရှတေို့း လိုကျနိုငျရငျ stay at home ဖွလြေော့ပေးတဲ့ ကာလအရောကျမှာ ပုံမှနျ အိပျခြိနျ ထခြိနျ( ည ၁၁နာရီအိပျ မနကျ ၆နာရီခှဲ-၇ နာရီထ) ကို ရရှိသှားပါလိမျ့မယျ။
အောကျပါတို့က နံနကျအိပျရာထခြိနျမှာ သငျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပွုလုပျသငျ့ တဲ့ အမူအကငျြ့တှေ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ နာရီနိုးစကျမွညျတာကွောငျ့ ဒါမှမဟုတျ အလိုအလြောကျအိပျရာမှ နိုးလာရငျ အိပျရာမှာ နှပျမနပေဲ အိပျရာကထလိုကျပါ။ အိပျရာက မထပဲ နှပျနရေငျ ပွနျလညျ အိပျခငျြစိတျ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
အိပျနစေဉျမှာ ခန်ဓာကိုယျက ၆-၈ နာရီလောကျ ရမေရရှိဘဲ နနေရေပါတယျ။သငျအိပျနစေဉျမှာ ခန်ဓာကိုယျက သူ့ရဲ့ လုပျငနျး (ဥပမာ အစာခွတော၊ အသကျရှူတာ၊ပကျြစီးနတေဲ့ ဆဲလျတှကေိုပွနျလညျပွုပွငျတာ)တှကေို ဆကျလကျ လုပျဆောငျနရေတာမို့ ရငေတျလာနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ မနကျအိပျရာထထခငျြးမှာ ရနှေဈ ဖနျခှကျလောကျ သောကျပေးပါ။(ဒီ အကွောငျးကို ဆောငျးပါး တဈပုဒျရေးပွီး ဖျောပွပေးပါမယျ။)
မနကျအိပျရာထခါစမှာ အရငျနတှေ့ကေ သငျပွုလုပျထားတဲ့ ကောငျးတာတှကေို တှေးပွီး ကွညျနူး လိုကျပါ။
ညစဉျ ၆-၈ နာရီလောကျ အိပျစကျခြိနျမှာ လှုပျရှားမှု မရှိတဲ့ အတှကျ မနကျအိပျရာထခါစမှာ ဆှဲဆနျ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွုလုပျတာက အဆဈနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ သနျမာမှုကို ရရှိနိုငျပါတယျ။
အိပျရာထခြိနျနောကျကွလို့ နံနကျစာကို မစားကွသူတှေ တျောတျောမြားပါတယျ။ အစာတဈနပျလှတျသှားတဲ့ အတှကျ နလေ့ယျစာနဲ့ ညစာကို မခငျြ့ ခြိနျ နိုငျတော့ပဲ အလှနျအမငျး စားသုံးမိ နိုငျပါတယျ။ နံနကျစာကသငျ့ကို စှမျးအငျ ပေးနိုငျတာမို့ အနညျးဆုံး ကွကျဥပွုတျ တဈလုံးတော့ ရအောငျ စားပါ။
အိပျရာထခါစ ဘလကျချကျောဖီသောကျတာက ကိုယျတှငျးကျောတီစောဟျောမုနျး ပမာဏ မြားလာတာကွောငျ့ စိုးရိမျစိတျ မြားလာနိုငျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဘလကျချကျောဖီက အစာအိမျရောငျရမျး နိုငျပါတယျ။
တဈခြို့က နံနကျစာစားပွီးမှ သှားတိုကျတဲ့ အကငျြ့ကို ပွုလုပျတတျကွပါတယျ။ အစာစားပွီးပွီးခငျြး သှားတိုကျတာက သဈသီး၊ဖြျောရညျနဲ့ အစာတှမှော ပါဝငျတဲ့ အကျစဈတှကွေောငျ့ သှားရဲ့ ကွှလှော ပကျြစီးနိုငျပါတယျ။ အစာစားပွီးပွီးခငျြး ရနေဲ့သာ ပလုတျကငျြးပါ။ အနညျးဆုံးမိနဈ ၃၀ စောငျ့ပွီးမှ သှားတိုကျပါ။
ရနှေေးနဲ့ ရခြေိုးရငျ ရနှေေးကွောငျ့ မှေးညငျးပေါကျတှေ ပှငျ့လာကာ အရပွေားထဲ ပိုးမှားနဲ့ ဖုနျမှုနျ့တှေ အလှယျတကူ ဝငျရောကျနိုငျပွီး ဝကျခွံ ပေါကျနိုငျပါတယျ။
မနကျပိုငျးမှာ ရအေေးနဲ့သာရခြေိုးသငျ့ပွီး ရနှေေးနဲ့ ခြိုးမယျဆိုရငျလညျးေ
ရနှေးနဲ့ ခြိုးအပွီး ရအေေး ပွနျလောငျးလိုကျပါ။
ဗဟုသုတ ရရှိအောငျ၊ခတျေကိုအမှီ လိုကျနိုငျအောငျ မနကျပိုငျးမှာ သတငျးစာ၊ဂြာနယျဖတျပါ။ ဖစျေ့ဘှတျပျေါက သတငျးတှဖေတျပါ။ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ သတငျးရငျးမွဈ ဖွဈဖို့တော့ လိုပါတယျ။
သငျ့ကိုကူညီသူ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျလိုကျပါ။ ဖစျေ့ဘှတျ ကွညျ့ရငျး သငျ့အတှကျ ပေးထားတဲ့ comment တှကေိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါ။ တဈခွားသူတှရေဲ့ အလှူဒါန တှကေို သာဓုချေါပါ။ သငျ့မှာ မကောငျးမွငျ စိတျရှိနရေငျတောငျ ဒါတှကေဖုံးလှမျးသှားနိုငျပါတယျ။
ပွုံးတာ၊ရယျမောတာကွောငျ့ ကိုယျတှငျးမှာ စိတျပြျောရှငျစတေဲ့ ဟျောမုနျး အောကျဆီတိုစငျထှကျလာကာ အကောငျးမွငျစိတျ ရရှိနိုငျပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ပွုလုပျသငျ့သော နံနကျအိပျရာထ အမူအကငျြ့မြား
ပှနျးပဲ့၊ပွတျရှဒဏျရာ ပွုစုနညျး မှနျကနျပါရဲ့လား
ပွန်းပဲ့၊ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ပြုစုနည်း မှန်ကန်ပါရဲ့လား
ကိုဗစ်ကြောင့် အိမ်မှာပဲနေရတဲ့ ကာလမှာ မတော်တဆ လိမ့်ကျတာကြောင့် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ဒါမှမဟုတ် လက်ဓါးထိ တာလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆေးရုံ ဆေးခန်းသွားဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်တာမို့ မိမိအိမ် မှာပဲ ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်ရာမှာ ဖြစ်တော့မှာမို့ မိမိပြုလုပ်တဲ့ နည်းလမ်းက မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ သိနိုင်အောင် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
၁-အနာကို အရက်ပြန် ဒါမှမဟုတ် ဟိုက်ဒြိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နဲ့ မဆေးကြောရပါ
ဒဏ်ရာကို ပိုးသန့်စင်အောင် အရက်ပြန် ဒါမှမဟုတ် ဟိုက်ဒြိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် နဲ့ ဆေးကြောတာမျိုး ပြုလုပ်တာက ဒဏ်ရာကတစ်သျှူးပျက်စီးနိုင်ပြီး အနာကျက်နှေး နိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာကို သန့်စင်ဖို့ ရေဘုံဘိုင် က ကျဆင်းလာတဲ့ ရေနဲ့ ဆေးကြောပါ။ဒဏ်ရာက သဲ၊ ဖုန်နဲ့ ပိုးတွေ ကင်းစင်အောင် ရေနဲ့ အနည်းဆုံး ၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောရပါမယ်။
ဒဏ်ရာက နက်ပြီး ကြီးလို့ ဆက်တိုက် သွေးထွက်နေရင်တော့ အရေးပေါ်ဌာန ကို သွားပြပါ။
အနာက စွတ်စိုမှု ရှိမှသာ အနာကျက် မြန်ပြီး အနာနဲ့ ပတ်တီးက အရမ်းကပ် မနေတော့ မှာပါ။ အနာထဲပိုး မဝင်အောင် အနာကို ရေနဲ့သေချာသန့်စင်ပြီး Tetra မျက်စဉ်းညှစ်ဆေးလိုမျိုး antibiotic cream တစ်မျိုးမျိုးကို ပါးပါးလေး လိမ်းထားပေးပါ။
၃ ။ အနာကို ဖုံးအုပ်ထားပါ
အနာကို ပတ်တီးဒါမှမဟုတ် ပလပ်စတာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားရပါမယ်။ ဒါမှ ဖုန်၊ သဲနဲ့ ပိုးမွှားတွေ မဝင်နိုင်တော့တဲ့ အပြင် အဝတ်နဲ့ ပွတ်တိုက်မှုလည်း မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အတွက် အနာကျက် မြန်နိုင်ပါတယ်။ ပတ်တီးနဲ့ မဖုံးအုပ်ခင် အနာကို ရေနဲ့ စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောပါ။
အနာပေါ်က ပလပ်စတာကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးဆွဲခွာရင် အနာဖေး ဖတ်ပါကွာ သွားနိုင်တာကြောင့် အနာပြန်ပွင့် သွားပါလိမ့်မယ်။ အနာနဲ့ ပတ်တီးက ကပ်နေလို့ ခွာရခက်ခဲနေရင် အနာဖေး ပျော့ပြောင်းသွားအောင် ရေနွေးနဲ့ ဆွတ်ပေးပါ။
၅-‌ရေနွေးပူလောင်ဒဏ်ရာပေါ် ထောပတ် မလိမ်းပါနဲ့
ရေနွေးပူလောင်တဲ့ ဒဏ်ရာပေါ် ထောပတ်လိမ်း ဒါမှမဟုတ် ရေခဲတုံး ကပ်တာက ဒဏ်ရာက တစ်သျှူး ပိုပြီး ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ အပူလောင် ဒဏ်ရာကို ဘုံဘိုင်ခေါင်းက ကျဆင်းလာတဲ့ ရေနဲ့ နာကျင်တာ သက်သာတဲ့အချိန်ထိ ဆေးကြောရပါမယ်။
အပူလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အရည်ကြည်ဖုတွေ အကာအကွယ် ရအောင် ပိုးသတ်ထားတဲ့ ပတ်တီးစနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Sofra-tulle ( ပိုးသေဆေး အဆီပါသောgauze ) နဲ့ ဖုံးအုပ်ပါ။
ကိုဗဈကွောငျ့ အိမျမှာပဲနရေတဲ့ ကာလမှာ မတျောတဆ လိမျ့ကတြာကွောငျ့ ပှနျးပဲ့ဒဏျရာ ဒါမှမဟုတျ လကျဓါးထိ တာလိုမြိုး ဖွဈခဲ့ရငျ ဆေးရုံ ဆေးခနျးသှားဖို့ အခကျအခဲရှိနိုငျတာမို့ မိမိအိမျ မှာပဲ ရှေးဦးသူနာပွုလုပျရာမှာ ဖွဈတော့မှာမို့ မိမိပွုလုပျတဲ့ နညျးလမျးက မှနျကနျမှု ရှိ မရှိ သိနိုငျအောငျ ဖျောပွ လိုကျပါတယျ။
၁-အနာကို အရကျပွနျ ဒါမှမဟုတျ ဟိုကျဒွိုဂငျြပါအောကျဆိုဒျနဲ့ မဆေးကွောရပါ
ဒဏျရာကို ပိုးသနျ့စငျအောငျ အရကျပွနျ ဒါမှမဟုတျ ဟိုကျဒွိုဂငျြပါအောကျဆိုဒျ နဲ့ ဆေးကွောတာမြိုး ပွုလုပျတာက ဒဏျရာကတဈသြှူးပကျြစီးနိုငျပွီး အနာကကျြနှေး နိုငျပါတယျ။ ဒဏျရာကို သနျ့စငျဖို့ ရဘေုံဘိုငျ က ကဆြငျးလာတဲ့ ရနေဲ့ ဆေးကွောပါ။ဒဏျရာက သဲ၊ ဖုနျနဲ့ ပိုးတှေ ကငျးစငျအောငျ ရနေဲ့ အနညျးဆုံး ၅ မိနဈခနျ့ ဆေးကွောရပါမယျ။
ဒဏျရာက နကျပွီး ကွီးလို့ ဆကျတိုကျ သှေးထှကျနရေငျတော့ အရေးပျေါဌာန ကို သှားပွပါ။
အနာက စှတျစိုမှု ရှိမှသာ အနာကကျြ မွနျပွီး အနာနဲ့ ပတျတီးက အရမျးကပျ မနတေော့ မှာပါ။ အနာထဲပိုး မဝငျအောငျ အနာကို ရနေဲ့သခြောသနျ့စငျပွီး Tetra မကျြစဉျးညှဈဆေးလိုမြိုး antibiotic cream တဈမြိုးမြိုးကို ပါးပါးလေး လိမျးထားပေးပါ။
အနာကို ပတျတီးဒါမှမဟုတျ ပလပျစတာနဲ့ ဖုံးအုပျထားရပါမယျ။ ဒါမှ ဖုနျ၊ သဲနဲ့ ပိုးမှားတှေ မဝငျနိုငျတော့တဲ့ အပွငျ အဝတျနဲ့ ပှတျတိုကျမှုလညျး မဖွဈနိုငျတော့တဲ့ အတှကျ အနာကကျြ မွနျနိုငျပါတယျ။ ပတျတီးနဲ့ မဖုံးအုပျခငျ အနာကို ရနေဲ့ စငျကွယျအောငျ ဆေးကွောပါ။
အနာပျေါက ပလပျစတာကို ခပျဆတျဆတျလေးဆှဲခှာရငျ အနာဖေး ဖတျပါကှာ သှားနိုငျတာကွောငျ့ အနာပွနျပှငျ့ သှားပါလိမျ့မယျ။ အနာနဲ့ ပတျတီးက ကပျနလေို့ ခှာရခကျခဲနရေငျ အနာဖေး ပြော့ပွောငျးသှားအောငျ ရနှေေးနဲ့ ဆှတျပေးပါ။
၅-ရနှေေးပူလောငျဒဏျရာပျေါ ထောပတျ မလိမျးပါနဲ့
ရနှေေးပူလောငျတဲ့ ဒဏျရာပျေါ ထောပတျလိမျး ဒါမှမဟုတျ ရခေဲတုံး ကပျတာက ဒဏျရာက တဈသြှူး ပိုပွီး ပကျြစီးနိုငျပါတယျ။ အပူလောငျ ဒဏျရာကို ဘုံဘိုငျခေါငျးက ကဆြငျးလာတဲ့ ရနေဲ့ နာကငျြတာ သကျသာတဲ့အခြိနျထိ ဆေးကွောရပါမယျ။
အပူလောငျဒဏျကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ အရညျကွညျဖုတှေ အကာအကှယျ ရအောငျ ပိုးသတျထားတဲ့ ပတျတီးစနဲ့ ဖုံးအုပျထားပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ Sofra-tulle ( ပိုးသဆေေး အဆီပါသောgauze ) နဲ့ ဖုံးအုပျပါ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ပှနျးပဲ့၊ပွတျရှဒဏျရာ ပွုစုနညျး မှနျကနျပါရဲ့လား
ညအိပျရာမဝငျခငျတိုငျး နှားနို့တဈခှကျသောကျသုံးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
ညအိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း နွားနို့တစ်ခွက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
အဟာရပြည့်ဝတဲ့ နွားနို့ဟာ အရိုးအဆစ်တွေကို သန်မာစေပြီး ကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အတွက် ကလေးလေးတွေကနေစလို့ လူကြီးတွေအထိ သောက်သုံးပေးသင့်တဲ့ အရာပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင် နို့တစ်ခွက်သောက်ပေးတာက များစွာသော အကျိုး ကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် နို့တစ်ခွက်သောက်တာဟာ ကောင်းမွန်နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ နွားနို့မှာ tryptophan နဲ့ melatonin ဓာတ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အိပ်ပျော်စေနိုင်သလို နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်စေနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန်မှုကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး အေးဆေးသက်သာစွာ အနားယူအိပ်စက်နိုင်စေပါတယ်နော်။
ညအိပ်ရာမဝင်ခင် နို့တစ်ခွက်သောက်တတ်တဲ့ အလေ့အထဟာ ဝိတ်ကို ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့အခါ ဝိတ်ပိုတက်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး နွားနို့က ပရိုတိန်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ညဘက် ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ ဝိတ်လည်း မတက်စေပဲ သောက်သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နွားနို့မှာပါဝင်တဲ့ ပရိုတန်းဓာတ်ကို ကစီဓာတ်လို့ခေါ်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ညအိပ်မရာမဝင်ခင် နို့သောက်ခြင်းက ကြွက်သားတွေကို ပိုသန်မာလာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက တစ်ခါတစ်လေမှာ လေပွတာ၊ ဗိုက်နာတာတွေ အခန့်မသင့်ရင် ဖြစ်တတ်လို့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ နွားနို့ကို သောက်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
ညဘက် ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်
တစ်ခါတစ်လေမှာ ညစာကို စောစားမိတဲ့ နေ့မျိုးမှာ ညဘက် ဗိုက်ဆာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်မရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ နွားနို့က အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နွားနို့မှာ ပရိုတိန်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ညအိပ်ရာမဝင်ခင် သောက်ခြင်းက အိပ်စက်နေချိန် ဗိုက်ဆာခြင်း ပြသနာကို ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
အဟာရပွညျ့ဝတဲ့ နှားနို့ဟာ အရိုးအဆဈတှကေို သနျမာစပွေီး ကွီးထှားမှုကို အထောကျအကူဖွဈစတေဲ့အတှကျ ကလေးလေးတှကေနစေလို့ လူကွီးတှအေထိ သောကျသုံးပေးသငျ့တဲ့ အရာပါ။ အိပျရာမဝငျခငျ နို့တဈခှကျသောကျပေးတာက မြားစှာသော အကြိုး ကြေးဇူးတှကေို ရရှိစနေိုငျပါတယျ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ညအိပျရာမဝငျခငျ နို့တဈခှကျသောကျတာဟာ ကောငျးမှနျနှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောစနေိုငျပါတယျ။ နှားနို့မှာ tryptophan နဲ့ melatonin ဓာတျတို့ပါဝငျတဲ့အတှကျ မွနျမွနျဆနျဆနျ အိပျပြျောစနေိုငျသလို နှဈခွိုကျစှာ အိပျစကျစနေိုငျပါတယျ။ခန်ဓာကိုယျကနေ စိတျခံစားမှု ကောငျးမှနျမှုကို ထုတျလှတျပေးပွီး အေးဆေးသကျသာစှာ အနားယူအိပျစကျနိုငျစပေါတယျနျော။
ညအိပျရာမဝငျခငျ နို့တဈခှကျသောကျတတျတဲ့ အလအေ့ထဟာ ဝိတျကို ကစြနေိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လူတှဟော ကောငျးမှနျစှာ အိပျမပြျောနိုငျတဲ့အခါ ဝိတျပိုတကျလရှေိ့ပါတယျ။ နောကျပွီး နှားနို့က ပရိုတိနျးဓာတျကွှယျဝတဲ့အတှကျ ညဘကျ ဗိုကျဆာတဲ့အခြိနျမှာ ဝိတျလညျး မတကျစပေဲ သောကျသုံးဖို့ အကောငျးဆုံးပဲ ဖွဈပါတယျ။
နှားနို့မှာပါဝငျတဲ့ ပရိုတနျးဓာတျကို ကစီဓာတျလို့ချေါပွီး လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ညအိပျမရာမဝငျခငျ နို့သောကျခွငျးက ကွှကျသားတှကေို ပိုသနျမာလာစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သတိထားရမှာက တဈခါတဈလမှော လပှေတာ၊ ဗိုကျနာတာတှေ အခနျ့မသငျ့ရငျ ဖွဈတတျလို့ သနျ့ရှငျးလတျဆတျတဲ့ နှားနို့ကို သောကျသုံးဖို့ လိုအပျပါတယျနျော။
ညဘကျ ဗိုကျဆာတတျတဲ့ ပွသနာကို ဖွရှေငျးနိုငျတယျ
တဈခါတဈလမှော ညစာကို စောစားမိတဲ့ နမြေို့းမှာ ညဘကျ ဗိုကျဆာတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပွီး ကောငျးကောငျးအိပျမရတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ နှားနို့က အကောငျးဆုံးပါပဲ။ နှားနို့မှာ ပရိုတိနျးဓာတျကွှယျဝတဲ့အတှကျ ညအိပျရာမဝငျခငျ သောကျခွငျးက အိပျစကျနခြေိနျ ဗိုကျဆာခွငျး ပွသနာကို ဖွရှေငျးပွီးသား ဖွဈစပေါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ညအိပျရာမဝငျခငျတိုငျး နှားနို့တဈခှကျသောကျသုံးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
ကွိုးခုနျခွငျးက ရလာမယျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုး ကြေးဇူး(၅)မြိုး
Posted on October 11, 2020 October 11, 2020 by Shangyi
ကြိုးခုန်ခြင်းက ရလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူး(၅)မျိုး
နေအိမ်မှာ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ထဲမှာ ကြိုးခုန်တာကလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ပါ။ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးပြီး အရိုးအ ဆစ် တွေ မ ကောင်းရင် တော့ ကြိုးခုန်တာမျိုးတွေ ကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။အိမ်မှာ ပိုက်ဆံ မကုန်တဲ့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား အားကစား ကြိုးခုန်ခြင်းက နေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ အ ကြောင်းကို jumpropedudes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
၀ိတ်ကျချင်တယ် ဘာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမလဲ မသိ ဖြစ်နေရင် အလွယ်လုပ် လို့ရတဲ့ ကြိုးခုန်တာကို လုပ်ပါ။(၁၅)မိနစ် လောက် ကြိုးခုန်ရင် ကယ်လို ရီ (၅၀၀)လောက် လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ဝိတ်ကျ ချင်တယ်၊ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းချင်ရင် တော့ ကြိုးခုန်ပါ။
နှလုံးကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်း
ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ကြိုးခုန်ရင် နှလုံးခုန်တွေ အရမ်းမြန်လာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ကြိုးခုန်တဲ့ အခါ မှာ မော တော့ အသက်ကို အရင် ထက်ပိုပြီး ပြင်းပြင်းရှုတတ်ကြပါတယ်။အောက်စီဂျင် များများရှု သွင်းတာက နှလုံး ကျန်းမာရေး အတွက် အများကြီး အထောက် အကူ ဖြစ် စေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပင်ကိုယ်နှလုံး ကျန်းမာရေး မ ကောင်းတဲ့ လူဆိုရင်တော့ အ ရမ်းမောတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးကို မလုပ် သင့်ပါဘူး။
Body အ နေ အထား ပုံစံ မှန်ကန်လာစေ
ကြိုးခုန်တယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ် အပေါ် ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်း ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးပါ။ ကြိုးခုန်တဲ့ အခါမှာ ခါးကို ဆန့်၊ကျော ကုန် အ နေ အထားမတ်မတ် နဲ့ ခုန်ရတာ မျိုးပါ။ပခုံး အ နေ အထားတွေ ပါ ဖွင့်ပြီး ခုန်မှ ရတာ မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် ကြိုးခုန်တာ ကို အ လေ့အကျင့်လုပ် ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Body အ နေ အ ထားပုံစံ မှန်ကန် လာစေပါတယ်။ Body အ ပေါ် ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်း ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ရတာ မို့ ဟန် ချက် မညီပဲ လဲ ကွဲတာ မျိုးတွေ ကိုလည်း သက်သာ စေပါတယ်။
အရိုးတွေကို သန်မာ စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာ ကြိုးခုန်တာကလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ပါ။ဒါပေမယ့် အရိုးအ ကြော မ ကောင်းတဲ့ လူကြီးပိုင်းတွေ က တော့ ကြိုးမခုန်သင့်ပါဘူး။ကြိုးခုန်တဲ့ လူနဲ့ ကြိုးမခုန်တဲ့ လူတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်အခါ မှာ ခုန်တဲ့ လူတွေက အရိုးသိပ်သည်းဆ ပိုများ တာကို တွေ့ ရပါတယ်။ဒါ ကြောင့် ပုံမှန် ကြိုးခုန်ခြင်းက အရိုးတွေကို သန်မာ စေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းလိုလို က တော့ အဆုတ် ကျန်းမာရေး အတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ ကြိုးခုန် ခြင်း ကလည်း အဆုတ် ကျန်းမာရေး အတွက် အ ထောက် အကူဖြစ်စေပါတယ်။ကြိုးခုန်တဲ့ အခါ မှာ မောပန်းပြီး အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှု ရတာ မို့ နှလုံး၊အဆုတ် ကျန်းမာ ရေးအပြင် ခံနိုင်ရည်အားကိုပါ မြင့်တက် စေပါတယ်။
နအေိမျမှာ အလှယျတကူ လုပျလို့ရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ထဲမှာ ကွိုးခုနျတာကလညျး တဈခု အပါအဝငျပါ။ဒါပမေယျ့ အသကျကွီးပွီး အရိုးအ ဆဈ တှေ မ ကောငျးရငျ တော့ ကွိုးခုနျတာမြိုးတှေ ကို မလုပျသငျ့ပါဘူး။အိမျမှာ ပိုကျဆံ မကုနျတဲ့ ကိုယျလကျ လှုပျရှား အားကစား ကွိုးခုနျခွငျးက နေ ပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှေ အ ကွောငျးကို jumpropedudes မှာ အခုလို ဖျောပွထားပါတယျ။
ဝိတျကခြငျြတယျ ဘာလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရမလဲ မသိ ဖွဈနရေငျ အလှယျလုပျ လို့ရတဲ့ ကွိုးခုနျတာကို လုပျပါ။(၁၅)မိနဈ လောကျ ကွိုးခုနျရငျ ကယျလို ရီ (၅၀၀)လောကျ လောငျကြှမျးနိုငျပါတယျ။ဝိတျကြ ခငျြတယျ၊ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးခငျြရငျ တော့ ကွိုးခုနျပါ။
နှလုံးကနျြးမာရေး အတှကျ ကောငျး
ပငျပငျပနျးပနျးနဲ့ ကွိုးခုနျရငျ နှလုံးခုနျတှေ အရမျးမွနျလာတာကို သတိထားမိကွမှာပါ။ကွိုးခုနျတဲ့ အခါ မှာ မော တော့ အသကျကို အရငျ ထကျပိုပွီး ပွငျးပွငျးရှုတတျကွပါတယျ။အောကျစီဂငျြ မြားမြားရှု သှငျးတာက နှလုံး ကနျြးမာရေး အတှကျ အမြားကွီး အထောကျ အကူ ဖွဈ စပေါတယျ။ဒါပမေယျ့ ပငျကိုယျနှလုံး ကနျြးမာရေး မ ကောငျးတဲ့ လူဆိုရငျတော့ အ ရမျးမောတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး မြိုးကို မလုပျ သငျ့ပါဘူး။
Body အ နေ အထား ပုံစံ မှနျကနျလာစေ
ကွိုးခုနျတယျဆိုတာက ခန်ဓာကိုယျ အပျေါ ပိုငျးနဲ့ အောကျပိုငျး ဟနျခကျြညီညီ လုပျရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး မြိုးပါ။ ကွိုးခုနျတဲ့ အခါမှာ ခါးကို ဆနျ့၊ကြော ကုနျ အ နေ အထားမတျမတျ နဲ့ ခုနျရတာ မြိုးပါ။ပခုံး အ နေ အထားတှေ ပါ ဖှငျ့ပွီး ခုနျမှ ရတာ မြိုး ဖွဈတာကွောငျ့ ကွိုးခုနျတာ ကို အ လအေ့ကငျြ့လုပျ ပေးမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ Body အ နေ အ ထားပုံစံ မှနျကနျ လာစပေါတယျ။ Body အ ပျေါ ပိုငျးနဲ့ အောကျပိုငျး ဟနျခကျြညီညီ လုပျရတာ မို့ ဟနျ ခကျြ မညီပဲ လဲ ကှဲတာ မြိုးတှေ ကိုလညျး သကျသာ စပေါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးတိုငျးလိုလို က တော့ အဆုတျ ကနျြးမာရေး အတှကျ အမြားကွီး အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။အဲ့ဒီအထဲမှာ ကွိုးခုနျ ခွငျး ကလညျး အဆုတျ ကနျြးမာရေး အတှကျ အ ထောကျ အကူဖွဈစပေါတယျ။ကွိုးခုနျတဲ့ အခါ မှာ မောပနျးပွီး အသကျကို ပွငျးပွငျးရှု ရတာ မို့ နှလုံး၊အဆုတျ ကနျြးမာ ရေးအပွငျ ခံနိုငျရညျအားကိုပါ မွငျ့တကျ စပေါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကွိုးခုနျခွငျးက ရလာမယျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုး ကြေးဇူး(၅)မြိုး
သံပုရာသီးစိမ်ထားတဲ့ရေကို အမြဲသောက်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
သံပုရာသီးဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်လို့နေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတွေဟာ ရိုးရိုးရေတောင်မဟုတ်တော့ဘဲ ရေထဲကို သံပုရာကွင်းလေးတွေ ထည့်ပြီးသောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုသောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုစေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်ရေဓာတ် ၉၁ အောင်စလိုအပ်သလို အမျိုးသားတွေကတော့ ၁၂၅ အောင်စတောင် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရိုးရိုးရေသောက်မယ့်အစား အရသာနဲ့အနံ့ပါအောင် သံပုရာသီးလေးထည့်ပေးခြင်းဟာ ရေကိုပိုသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ရေဓာတ်လည်း ပိုပြည့်ဝစေပါတယ်တဲ့။
သံပုရာသီးမှာ ဗီတာမင် စီပါဝင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိမှာပါ။ ဗီတာမင် စီ ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဗီတာမင် စီ ဟာ antioxidant ဓာတ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက် သာမန်အအေးမိတာတွေအပြင် အူမဘကီးကင်ဆာ၊ သွေးတိုးခြင်းနဲ့ လေဖြန်းခြင်းတို့ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သံပုရာသီးဟာ polyphenol antioxidants တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေမှုကိုလည်း အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။
ထမင်းစားပြီးတိုင်း သံပုရာစိမ်ရေတစ်ခွက်သောကခြင်းဟာ စားကြွင်းစားကျန်တွေကို ချေဖြတ်ပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ခံတွင်းနံ့တွေကိုလည်း ပျောက်စေပါတယ်။
သံပုရာသီးဟာ လူ့ခန်ဓာကိုယျကိုအကြိုးပွုစတေဲ့ ဓာတျတှအေမြားကွီးပါဝငျလို့နပေါတယျ။ အခုနောကျပိုငျး ကနျြးမာရေးလိုကျစားသူတှဟော ရိုးရိုးရတေောငျမဟုတျတော့ဘဲ ရထေဲကို သံပုရာကှငျးလေးတှေ ထညျ့ပွီးသောကျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီလိုသောကျခွငျးဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘယျလိုအကြိုးပွုစလေဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
အမြိုးသမီးတှဟော ပုံမှနျရဓောတျ ၉၁ အောငျစလိုအပျသလို အမြိုးသားတှကေတော့ ၁၂၅ အောငျစတောငျ လိုအပျပါတယျ။ ဒီတော့ ရိုးရိုးရသေောကျမယျ့အစား အရသာနဲ့အနံ့ပါအောငျ သံပုရာသီးလေးထညျ့ပေးခွငျးဟာ ရကေိုပိုသောကျခငျြစိတျဖွဈစတေဲ့အတှကျ ရဓောတျလညျး ပိုပွညျ့ဝစပေါတယျတဲ့။
သံပုရာသီးမှာ ဗီတာမငျ စီပါဝငျတယျဆိုတာ လူတိုငျး သိမှာပါ။ ဗီတာမငျ စီ ဟာ ခန်ဓာကိုယျကို အကြိုးပွုနိုငျတဲ့ ဓာတျတှထေဲက တဈခုပါပဲ။ ဗီတာမငျ စီ ဟာ antioxidant ဓာတျပေါကွှယျဝတဲ့အပွငျ ကိုယျခံအားကိုလညျး မွှငျ့တငျပေးတဲ့အတှကျ သာမနျအအေးမိတာတှအေပွငျ အူမဘကီးကငျဆာ၊ သှေးတိုးခွငျးနဲ့ လဖွေနျးခွငျးတို့ကိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on သံပုရာသီးစိမျထားတဲ့ရကေို အမွဲသောကျပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျတဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြား
နကွောစပေုံ့မှနျစားပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့အလှပဆိုငျရာကောငျးကြိုးမြား
Posted on October 10, 2020 October 10, 2020 by Shangyi
နေကြာစေ့ပုံမှန်စားပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့အလှပဆိုင်ရာကောင်းကျိုးများ
နေကြာစေ့ကိုက်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့လူရှိလား။ နေကြာစေ့ကို နေ့တိုင်း ပုံမှန်လေး လက်ခုတ်စာစားပေးရုံနဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိလာမှာပါတဲ့။ အဲဒါတွေကတော့..
ဗီတာမင် E နဲ့ antioxidants တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တော်ရုံ အအေးမိဖျားနာခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၂) ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုကို အထောက်အကူပြုတယ်
ဝိတ်ချတဲ့လူတွေဟာ နေကြာစေ့စားတဲ့အခါကျရင် အဆာလည်းခံတယ်၊ အင်အားလည်းပြည့်ဝပါတယ်။
နေကြာစေ့ဟာ ဝါးနေရတာကိုက စိတ်ဖိဆီးမှုကို ပြေပျောက်စေတာပါတဲ့။
(၄) သွေးတွင်းဓာတ်ကို ထိန်းငြှိပေးတယ်
နေကြာစေ့ဟာ သွေးတိုးသမားတွေ မှီဝဲသင့်တဲ့ အစေ့အဆံဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
ကြည်လင်ပြီး အသားအရေလေး glow နေစေဖို့အတွက် linolenic, oleic နဲ့ palmitic acid စတဲ့ ပြည့်ဝအဆီတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကော်လဂျင်ဓာတ်နဲ့ elastin တို့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့ဆည်းရာမှာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
(၆) နှလုံးကျန်းမာရေးကို အားကောင်းစေတယ်
လိုအပ်တဲ့ပြည့်ဝအဆီနဲ့ phytosterols တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးပြီး အားကောင်းစေပါတယ်။
နကွောစကေို့ကျရတာ ဝါသနာပါတဲ့လူရှိလား။ နကွောစကေို့ နတေို့ငျး ပုံမှနျလေး လကျခုတျစာစားပေးရုံနဲ့ဒီလိုအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ရရှိလာမှာပါတဲ့။ အဲဒါတှကေတော့..
ဗီတာမငျ E နဲ့ antioxidants တှပေါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ တျောရုံ အအေးမိဖြားနာခွငျးတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။
(၂) ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးမှုကို အထောကျအကူပွုတယျ
ဝိတျခတြဲ့လူတှဟော နကွောစစေ့ားတဲ့အခါကရြငျ အဆာလညျးခံတယျ၊ အငျအားလညျးပွညျ့ဝပါတယျ။
နကွောစဟေ့ာ ဝါးနရေတာကိုက စိတျဖိဆီးမှုကို ပွပြေောကျစတောပါတဲ့။
(၄) သှေးတှငျးဓာတျကို ထိနျးငွှိပေးတယျ
နကွောစဟေ့ာ သှေးတိုးသမားတှေ မှီဝဲသငျ့တဲ့ အစအေ့ဆံဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။
ကွညျလငျပွီး အသားအရလေေး glow နစေဖေို့အတှကျ linolenic, oleic နဲ့ palmitic acid စတဲ့ ပွညျ့ဝအဆီတှပေါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကျောလဂငျြဓာတျနဲ့ elastin တို့ကို ပွနျလညျဖှဲ့ဆညျးရာမှာ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
(၆) နှလုံးကနျြးမာရေးကို အားကောငျးစတေယျ
လိုအပျတဲ့ပွညျ့ဝအဆီနဲ့ phytosterols တှေ ပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ နှလုံးကနျြးမာရေးကို ကာကှယျပေးပွီး အားကောငျးစပေါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on နကွောစပေုံ့မှနျစားပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့အလှပဆိုငျရာကောငျးကြိုးမြား
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ အံ့ဖွယ်အကျိုး (၁၀) ခု
ရုံးပတေသီးဟာ အတို့အမြှုပ်ပဲလုပ်လုပ်၊ ဟင်းချက်ပဲစားစား၊ ကြော်ပဲစားစား၊ ဟင်းခါးလုပ်ပြီးပဲသောက်သောက် ဘက်စုံစားနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက် ရုံးပတေသီးဟာ မိန်းကလေးတွေအတွက် သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေးစွမ်းတစ်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။
ဒီတော့ ရုံးပတေသီးစားပေးခြင်းကြောင့် ရလာနိုင်တဲ့ အံ့မခမ်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) Carotenoids ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် မျက်လ့းကို အားကောင်းစေပါတယ်။
(2) ဒီအပြင် Carotenoids ဓာတ်ကပဲ အသားအရေပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အားပေးကူညီပေးပါတယ်။ နေလောင်တာတွေနဲ့ အရွယ်တင်နိုပျိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အထောက်အကူပြုမှာပါ။
(3) သွေးနီဥလျော့နည်းခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။
(4) ဗီတာမင် စီ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် anti-oxidant ပေါကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ကိုယ်ခံအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
(5) ရုံးပတေသီးမှာပါဝင်တဲ့ Okra ဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
(6) ဒီအပြင် Bhindi ဟာ ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
(7) Bhindi ရဲ့ နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို မဖြစ်စေတာပါပဲ။
(8) ဖိုက်ဘာဓာတ်ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုလက်စရောတွေကိုလည်း ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသည်းထဲဝင်ရောက်မယ့် ကိုလက်စရောတွေကိုပေါ့။
(9) Pectin ဓာတ်ဟာလည်း နှလြုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
(10) ရုန်းပတေသီးရဲ့ နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ အူလမ်းကြောင်းကို သူ့ရဲ့ သဘာဝချွဲကျိကျိအနှစ်တွေနဲ့ ရှင်းလင်းပေးသွားတဲ့အတွက်အူမကြီးကင်ဆာမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါပဲ။
ရုံးပတသေီးဟာ အတို့အမွှုပျပဲလုပျလုပျ၊ ဟငျးခကျြပဲစားစား၊ ကွျောပဲစားစား၊ ဟငျးခါးလုပျပွီးပဲသောကျသောကျ ဘကျစုံစားနိုငျတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ နောကျ ရုံးပတသေီးဟာ မိနျးကလေးတှအေတှကျ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေးစှမျးတဈလကျဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး အားလုံးကွားဖူးကွမှာပါ။
ဒီတော့ ရုံးပတသေီးစားပေးခွငျးကွောငျ့ ရလာနိုငျတဲ့ အံ့မခမျးအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(1) Carotenoids ဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျ မကျြလ့းကို အားကောငျးစပေါတယျ။
(2) ဒီအပွငျ Carotenoids ဓာတျကပဲ အသားအရပွေနျလညျပွုပွငျတဲ့ လုပျငနျးတှမှော အားပေးကူညီပေးပါတယျ။ နလေောငျတာတှနေဲ့ အရှယျတငျနိုပြိုမှုလုပျငနျးစဉျတှမှော အထောကျအကူပွုမှာပါ။
(3) သှေးနီဥလြော့နညျးခွငျးကို ပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးပါတယျ။
(4) ဗီတာမငျ စီ ပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ anti-oxidant ပေါကွှယျဝတဲ့အတှကျ ကိုယျခံအားကိုလညျး မွှငျ့တငျပေးပါတယျ။
(5) ရုံးပတသေီးမှာပါဝငျတဲ့ Okra ဟာ ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးခွငျးကို အထောကျအကူပွုပါတယျ။
(6) ဒီအပွငျ Bhindi ဟာ ဆီးခြိုဖွဈခွငျးကို ကာကှယျပေးမှာပါ။
(7) Bhindi ရဲ့ နောကျထပျ လုပျဆောငျခကျြကတော့ ဝမျးခြုပျခွငျးကို မဖွဈစတောပါပဲ။
(8) ဖိုကျဘာဓာတျပေါကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကိုလကျစရောတှကေိုလညျး ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အသညျးထဲဝငျရောကျမယျ့ ကိုလကျစရောတှကေိုပေါ့။
(9) Pectin ဓာတျဟာလညျး နှလွုံးကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
(10) ရုနျးပတသေီးရဲ့ နောကျထပျကောငျးကြိုးတဈခုကတော့ အူလမျးကွောငျးကို သူ့ရဲ့ သဘာဝခြှဲကြိကြိအနှဈတှနေဲ့ ရှငျးလငျးပေးသှားတဲ့အတှကျအူမကွီးကငျဆာမှ ကာကှယျပေးနိုငျတာပါပဲ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on မိနျးကလေးတိုငျးအတှကျ ဆေးတဈလကျဖွဈတဲ့ ရုံးပတသေီးရဲ့ အံ့ဖှယျအကြိုး (၁၀) ခု
Posted on October 9, 2020 October 9, 2020 by Shangyi
အခုလိုရာသီမျိုးမှာ နာနာတ်သီးချိုချိုလေးတွေ ပေါနေပြီမို့နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုပြောပါရစေနော်။ အဲ့ဒါက နာနာတ်သီး Detox ရည်ပါ။ Detox ရည်ဆိုတာ သဘာဝအသီးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး ခန္ဓ္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှာပေးတဲ့ အရည်တစ်မျိုးပါ။
နာနာတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ Bromelain လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်းမ်ဓာတ်ဟာ အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး ဖောင်းရောင်ခြင်းတွေမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ အဲ့ဒီ့အင်ဇိုင်းဓာတ်က ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ နာနာတ်သီး ၁၀၀ဂရမ်မှာ ၄၀ကယ်လိုရီပဲပါဝင်တာမို့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။
နာနာတ်ဖျော်ရည်ကို (၃) ရက်ဆက်တိုက် သောက်ပေးရင် အူထဲမှာရှိတဲ့သန်ကောင်၊ တုပ်ကောင်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။ သူ့မှာ အင်ဇိုင်းနဲ့ Antioxidants တွေပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့က အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
နာနာတ်ရည်မှာပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ သတ္တုဓာတ်က အရိုးနဲ့ သွားတွေကိုခိုင်မာစေပါသေးတယ်။ မျက်လုံးအမြင်အာရုံကိုကောင်းစေတဲ့အပြင် ကင်ဆာဆဲလ်တစ်မျိုးကိုလည်းတားဆီးပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများစွာပေးတဲ့ နာနာတ်သီး Detox ဖျော်ရည်လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပါဦးမယ်။
နာနာတ်သီးကို အခွံနွှာ၊ အတုံးသေးသေးလေးတွေ ပိုင်းပြီး ဖန်ပုလင်းတစ်ခုမှာထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ရေထည့်ပါ။ ပြီးရင် ပူစီနံထည့်လိုက်ပါ။ ပုလင်းအဖုံးကိုသေချာလုံအောင်ပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ တစ်ညထားပြီး သောက်လို့ရပါပြီ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကနျြးမာရေးကို အဖကျဖကျက ကောငျးစတေဲ့ နာနာတျသီး Detox ဖြျောရညျ
ရှာလကာရည်ဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် ဖျော်ရည်တွေအချဉ်ပေါက်ပြီး ဖြစ်လာတာမို့ သူ့မှာအက်ဆီတစ်အက်စစ် အများကြီးပါတယ်။
ဒါကြောင့် မီးဖိုချောင်မှာ ရုတ်တရက် အရေးပေါ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ အနာပိုးမဝင်စေဖို့၊ အနာသန့်ရှင်းစေဖို့ ရုတ်တရက်အရက်ပျံတို့၊ ဆေးတို့ရှာမရရင် ရှာလကာရည် လောင်းချလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ရှာလကာရည်မှာ စူးရှတဲ့အနံ့ရှိတာမို့ ဆေးလိပ်နံ့စွဲနေတဲ့ အဝတ်အထည်တွေ၊ အနံ့ဆိုးထွက်နေတဲ့အဝတ်အထည်တွေကို ရှာလကာရည်နဲ့ ရေရောပြီး ခဏစိမ်ထားပြီးမှ လျှော်ဖွပ်ရင် အနံဆိုးတွေပျောက်စေပါတယ်။
ခြင်ကိုက်ရင်လည်း အယားပြေအောင် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
လည်ချောင်းနာ၊ အာသီးရောင်၊ အာခေါင်ခြောက်တဲ့အခါမှာတော့ ရှာလကာရည်တစ်ဇွန်းစာ နဲ့ ရေနွေးတစ်ဖန်ခွက် ရောဖျော်ပြီး ပလုတ်ကျင်းပေးပါက သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ရှာလကာရည်တံဆိပ် မျိုးစုံရှိတဲ့အနက် (ဥပမာ – မောက်၊ ဆီဒါ၊ ဝိုင်၊ ရိုးရိုး) အားလုံးကို မီးဖိုချောင်ဆေးမြီးတိုအဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအထဲက ပန်းသီးကထုတ်တဲ့ ဆီဒါရှာလရည်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပန်းသီးမှာ မဲလစ်အက်စစ် (Malic Acid) ပါဝင်ပြီး အဲဒီအက်စစ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုဓာတ်နဲ့ ပေါင်းကာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ရှာလကာရညျဟာ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကွေောငျ့ ဖြျောရညျတှအေခဉျြပေါကျပွီး ဖွဈလာတာမို့ သူ့မှာအကျဆီတဈအကျစဈ အမြားကွီးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မီးဖိုခြောငျမှာ ရုတျတရကျ အရေးပျေါထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့အခါ အနာပိုးမဝငျစဖေို့၊ အနာသနျ့ရှငျးစဖေို့ ရုတျတရကျအရကျပြံတို့၊ ဆေးတို့ရှာမရရငျ ရှာလကာရညျ လောငျးခလြိုကျနိုငျပါတယျ။
ရှာလကာရညျမှာ စူးရှတဲ့အနံ့ရှိတာမို့ ဆေးလိပျနံ့စှဲနတေဲ့ အဝတျအထညျတှေ၊ အနံ့ဆိုးထှကျနတေဲ့အဝတျအထညျတှကေို ရှာလကာရညျနဲ့ ရရေောပွီး ခဏစိမျထားပွီးမှ လြှျောဖှပျရငျ အနံဆိုးတှပြေောကျစပေါတယျ။
ခွငျကိုကျရငျလညျး အယားပွအေောငျ လိမျးပေးနိုငျပါတယျ။
လညျခြောငျးနာ၊ အာသီးရောငျ၊ အာခေါငျခွောကျတဲ့အခါမှာတော့ ရှာလကာရညျတဈဇှနျးစာ နဲ့ ရနှေေးတဈဖနျခှကျ ရောဖြျောပွီး ပလုတျကငျြးပေးပါက သကျသာနိုငျပါတယျ။
ရှာလကာရညျတံဆိပျ မြိုးစုံရှိတဲ့အနကျ (ဥပမာ – မောကျ၊ ဆီဒါ၊ ဝိုငျ၊ ရိုးရိုး) အားလုံးကို မီးဖိုခြောငျဆေးမွီးတိုအဖွဈ သုံးနိုငျပါတယျ။
အဲဒီအထဲက ပနျးသီးကထုတျတဲ့ ဆီဒါရှာလရညျဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကောငျးဆုံးပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပနျးသီးမှာ မဲလဈအကျစဈ (Malic Acid) ပါဝငျပွီး အဲဒီအကျစဈဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲက မဂ်ဂနီစီယမျသတ်တုဓာတျနဲ့ ပေါငျးကာ နာကငျြကိုကျခဲမှုဝဒေနာကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဘကျစုံအသုံးဝငျတဲ့ ရှာလကာရညျ
၁. ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ
အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိသည်။
၂. နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည် ။
၃. ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည် ။
၄. ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပြီး ညအိပ်ခါနီး ခြေဖဝါး အလည်တည့်တည့်ကပ်အိပ်ပါ ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက်များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။
အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမည် ။
၅. ရေနွေးထဲကို ပူတီနာ(ပူစီနံ) အရွက် ၅ရွက် ၆ရွက်ကိုထည့်ပြီး ခပ်နွေးနွေးလေးအနေအထားရောက်ရင်သောက်ပြီး အိပ်ယာထဲဝင်လိုက်ပါတဲ့။ ခဏနေရင် အိပ်ပျော်သွားလိုက်မယ်တဲ့။
၁. ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး မှညျ့စားပါ
အိပျစကျခွငျးတှကျ အထူးကောငျးမှနျးပွီး အားရှိသညျ။
၂. နှားနို့သောကျခွငျးက အရိုးအဆဈသနျမာသညျ့အပွငျ အိပျစကျခွငျးကို မွနျဆနျစပေါသညျ ။
၃. ကွကျသှနျဖွူခေါငျးအုံးအောကျ၃တကျထားအိပျပါ ။ဦးနှောကျမှ အဆိပျအတောကျမြားကို ဖယျရှားပေးပွီး အိပျစကျမှုကို မွနျဆနျစသေညျ ။
၄. ကွကျသှနျနီထကျခွကျခှဲပွီး ညအိပျခါနီး ခွဖေဝါး အလညျတညျ့တညျ့ကပျအိပျပါ ။ တဈကိုယျလုံးမှ အဆိပျအတောကျမြားကို စုပျယူပါလိမျ့မယျ။
အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကွီးမရှေး လုပျပေးပါက သကျသာပြောကျကငျးစပေါမညျ ။
၅. ရနှေေးထဲကို ပူတီနာ(ပူစီနံ) အရှကျ ၅ရှကျ ၆ရှကျကိုထညျ့ပွီး ခပျနှေးနှေးလေးအနအေထားရောကျရငျသောကျပွီး အိပျယာထဲဝငျလိုကျပါတဲ့။ ခဏနရေငျ အိပျပြျောသှားလိုကျမယျတဲ့။
Credit .original writer
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ညအိပျမပြျောလြှငျ